Namandri-tena ny mpitondra Mirongatra ny fitakiana samihafa
Olom-panjakana manao propagandy Mampitandrina ny Praiminisitra
Namoaka fanambarana sy fampahatsiahivana ny Praiminisitra omaly 11 oktobra ny amin’ny tokony hanajana ireo voalazan’ny andininy faha-57 ny lalàna fehizoro 2018-008 mifehy ny ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka,
Fiovaovan’ny toetr’andro Mamotika ny sehatra fambolena
Tahaka ny mahazatra dia ankalazaina isan-taona ny herinandro mahakasika ny fiovaovan’ny toetr’andro. Anisan’ny nanamarika izany i Madagasikara omaly alakamisy 11 oktobra tetsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely niaraka tamin’ny Vondrona Eoropeanina.
Hetsika Biennale de Venise Sambany hanana solontena i Madagasikara
Ny mpanakanto Joel Andrianomeharisoa no sambany hisolotena an’i Madagasikara mandritra ilay hetsika « Biennale d’Art contemporain de Venise » hotontosaina mandritry ny volana novambra izao.
Fiarovana ireo nosy manodidina Miankina amin’izay filoha ho lany eo
Hafahafa ny fomba fizotry ny fikarakarana fifidianana, hoy ny fanehoan-kevitr’ireo mpanao politika. Tsiliam-baovao iray no nahenoana fa mbola manomana kandida iray ho filoham-pirenena amin’ireo 36 isa indray ny frantsay hahafahany mametraka ny politikany, indrindra mikasika ireo nosy manodidina.
CEDS Nivoaka ny andiany faha 14
Namoaka mpianatra am-polony indray ny CEDS ( Centre d’études diplomatiques et strategiques) tarihin-dRasoarahona Solofo.
Miteny ny Teknisianina Tena hosoka ilay “Pérmis biométrique”
Niteraka adihevitra lehibe ny resaka “pérmis biometrique” eto amintsika, ka dia nanasa vahiny ny fandaharana Teknisianina tao amin’ny Top Radio 102.8 FM omaly, nanazava io resaka “biometrika” io.
Tanora eto Madagasikara Marefo amin’ny sehatra ara-toekarena
Omaly talata 9 oktobra no nampahafantarina tetsy amin’ny foibeny Nanisana ny mombamomba ny fikambanana Youg Men’s Christian Association (YMCA). 5000 ny mpikambana ao, 119 ny firenena manerana an’izao tontolo izao no misy azy ary 24 ny firenena afrikanina ahitana azy.
Miverimberina ny fitakiana isan-karazany eto amin’ny firenena noho ny tsy fisian’ny tena vahaolana maharitra, fa ny fampandriana adrisa no betsaka, hany ka miotrika eny foana ny fitakiana.
Toa mifoha ho azy eny foana, raha tsy hilaza afatsy ny an’ny Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka na ny SECES, izay vao tsy ela akory izay no nanambana tsy hiditra amin’ny taom-pianarana 2018, raha tsy mivaly ny fitakiana efa hatry ny ela. Torak’izany ny an’ny mpandraharaha ny fonja izay niafara tamin’ny tsy fandraisana gadra na fitondrana azy ireny teny amin’ny fitsarana, herinandro vitsy lasa izay. Ny an’ny mpitatitra io mbola mananontanona io, ary efa mandeha ny vono afon’ny fanjakana eo anatrehan’ny zava-misy. Mitatao eo an-damosin’ny fitondrana hatrany ny famahana ireny hetsi-pitakiana isan-karazany ireny. Raha vao mivaha ny an’ny an-kilany, toy io an’ny mpitatitra izay heverina fa hizotra amin’ny fanentsenana ara-bola ny elanelam-bidy na “compensation” sy “subvention”, dia mipoitra ny an’ny an-daniny, hany ka tototry ny hetsi-pitakiana ny mpitondra fanjakana. Karazan’ny midi-kizo sy mamandri-tena ny mpitondra. Vao mainka mampihetsika ny hambom-pon’ny sendika na ny mpanao fitakiana isan-karazany rahateo ny fisian’ny resaka kolikoly sy volabe mihodina eto amin’ny firenena, raha tsy hilaza afa tsy ny eny Tsimbazaza, toy ny fandaniana ny lalàm-pifidianana nampalaza ny kolikoly avo lenta. Midika izany fa manam-bola ny fanjakana, saingy hoenti-miaro seza amin’ny politika, hany ka mitombo ny fahatezerana sy ny herim-pitakiana. Nalaza iny ny resaka momba ny 50 tapitrisa na 60 tapitrisa avy ho an’ny depiote nanambazana azy ireo, ka efa mananika ny 5 miliara ariary no lany, raha tena nisy tokoa. Olom-bitsy no misitraka ny vola sy harena ary toa lanilany foana amin’ny tsy misy dikany kanefa ny mpiasam-panjaka, ohatra, tsy nisy ny fampiakarana karama. Ny vidin-jiro midangana, ny vidin-tsolika miakatra, ny vidim-piainana mampikolay kanefa ny mpitondra toa manam-bola mety hahavaha amin’ny ampahany na manontolo ny olana, saingy manompa vahoaka amin’ny zavatra tsy misy dikany sy ny kolikoly. Raha ny volabe nanambazana ny depiote na ny nireven’ny HVM tamin’ireny filankevitry ny minisitra mitety faritra ireny fotsiny aza angamba efa nahavita toby famatsiana herinaratra goavambe, ohatra, saingy ny finiavana sy ny fahatongavan-tsaina no tsy misy. Atao mahagaga ve raha mirongatra ny fitakiana isan-karazany ?